Opera House Sydney - Biraom-pahaizana momba ny trano
Visual Arts Buildings & Structures
Architecture any Aostralia nataon'i Jorn Utzon
Ilay mpahay tantara danois Jørn Utzon , Prize laureate 2003 Pritzker, dia nanapaka ny fitsipika rehetra raha nahazo fifaninanana iraisam-pirenena izy tamin'ny taona 1957 mba hamoronana sehatra teatra vaovao tao Sydney, Australie. Tamin'ny 1966 dia niala tamin'ny tetikasa i Utzon, izay vita teo ambany fitarihan'i Peter Hall (1931-1995). Androany, ity trano famelabelarana Maoderina ity dia iray amin'ireo rafitra malaza sy be sary indrindra amin'ny vanim-potoana maoderina.
Ny endriky kanto ao amin'ny efitranon'ny Opera House ao Sydney dia avy amin'ny endriky ny akoran'ny tafo maro. Ahoana no nahatonga ny hevitry ny mpahay tantara Danemark ho lasa zavaboary aostraliana? Misy takelaka iray eo an-toerana manoritsoritra ny fivoahana ireo endrika ireo - izy ireo dia ampahany amin'ny sehatra iray.
Ao amin'ny Bennelong Point any Sydney Harbour, ny trano fampirantiana dia sehatra roa lehibe indrindra, an-jatony, eo amoron-dranomasin'i Sydney, Aostralia. Nosoratana tamin'ny fomba ofisialy ny Queen Elizabeth II tamin'ny Ôktôbra 1973 ny tranombakoka malaza malaza antsoina hoe UNESCO World Heritage Site tamin'ny taona 2007 ary koa izy dia finalista ho an'ny New Seven Wonders of the World . Nantsoin'ny UNESCO ny Trano Fototra "sangan'asa tamin'ny taonjato faha-20."
Trano fandihizan'i Sydney eo ambany fanorenana tamin'ny Aogositra 1966. Keystone / Getty Images
Ny fitaovam-panorenana ivelany dia ahitana tsokan-tsolika mialoha izay "mitsambikina amin'ny vongam-bato iray" ary misy rindrina vita amin'ny rindrina vita amin'ny raozy vita amin'ny latabatra boribory. Ireo akorandriaka dia voapetaka amin'ny lakaoly tsy misy fotony.
Famoronana fananganana fananganana fanavaozana:
"... iray amin'ireo fanamby faran'izay manan-danja izay misy ifandraisany amin'ny fomba fijeriny [ Jørn Utzon ], izany hoe ny fametrahana ireo fitaovana efa nofonosina ao anatin'ny fivoriam-be iray ao anatin'izany fomba izany mba hahatratrarana ny endrika iraisana fa ny fisondrotan'ny toekarena indray mandeha ara-dalàna sy ny organika. Afaka jerentsika ity fitsipika ity eo am-panatontosana ny fihaonan'ny toeram-pivarotana lehibe ao amin'ny efitranon'ny tranom-pasika Sydney Opera, izay misy tsangambato miendrika tavy hatramin'ny folo taonina Nentina ho any amin'ny toerana iray izy ireo ary nifanelanelana nifanelanelana, teo amin'ny roapolo metatra teo ho eo. "- Kenneth Frampton
Ahoana no nanorenana ny tranoben'ny Opera manan'i Sydney
Jorn Utzon, mpanao mari-trano 38 taona, tao amin'ny Opera House Sydney, nanamboatra ny biraony, Febroary 1957. Saripikan'i Keystone / Hulton Archive Collection / Getty Images
Satria i Utzon dia nandao ny tetikasa midi-draharahan'ny tetikasa, dia matetika no tsy mazava ny fanapahan-kevitra sasantsasany. Ny tranonkala ofisialy dia milaza fa ny "rindrin-trano" dia "natsangana araka ny fanovana noforonin'i Peter Hall, mpandimby an'i Utzon." Tsy isalasalana fa efa nisy hatramin'izay nipoiran'ny endri-tsoratr'ireo shell geometika hita eo amin'ny sehatra.
Tahaka ny ankamaroan'ny tetikasan'i Utzon, anisan'izany i Can Lis ao an-tranony, ny Opera House ao Sydney dia mampiasa ny sehatra hiasany amin'ny fomba mahazatra, sehatra fananganana rafi-panavaozana azony avy amin'ny Mayan any Meksika.
Fanamarihan'i Jørn Utzon :
"... ny tetikasa dia ny hamela ny sehatra hanapaka amin'ny endriny toy ny antsy ary hanasaraka tanteraka ny asa sy ny ambaratonga faharoa. Eo an-tampon'ilay seha-pamokarana no ahitan'ny mpijery ny asan'ny zavakanto, ary eo ambanin'ny sehatra no misy ny fiomanana rehetra."
"Mba hanehoana ny sehatra sy ny fialana amin'ny fandravana dia zavatra tena manan-danja izany, rehefa manomboka manorina ambonimbony izany. Toeram-ponenana tsy maneho ny hakanton'ilay sehatra ... eo amin'ny tetika ho an'ny Opera House ao Sydney ... ianao dia afaka mahita ny tafo, ny endrika boribory, mihantona ambony na ambany kokoa eo ambonin'ny lemaka. "
"Ny tsy fitovian'ny endrika sy ny fihodinana tsy tapaka eo anelanelan'ireo singa anankiroa ireo dia miteraka amin'ny sehatry ny hery ara-tsakafo lehibe azo tanterahina amin'ny alalan'ny rafitra maoderina amin'ny fanamboarana fotokopia, izay nanome fitaovana tsara tarehy maro ho eo an-tànan'ny mpanao mari-trano."
Fanamarihana avy amin'ny Komity Loka Pritzker:
Ny tonon'ny Opera House dia nanomboka tamin'ny taona 1957, raha mbola teo amin'ny faha-38 taonany i Jørn Utzon dia mbola mpanao mari-pamantarana tsy fantatra tsy fantatra tamin'ny toeram-pitsaboana tany Danemark akaikin'ny toerana nahateran'i Shakespeare ny toeram-ponenan'i Hamlet.
Nipetraka tany amin'ny tanàna kely misy ranomasina izy niaraka tamin'ny vadiny sy zanaka telo - zanaka iray, Kim, teraka tamin'io taona io; I Jan hafa iray teraka tamin'ny 1944, ary zanakavavy iray, Lin, teraka tamin'ny taona 1946. Ny telo dia manaraka ny dian-tongotry ny rainy ary ho lasa architects.
Ny tranon'izy ireo dia tranobe iray tao Hellebæk izay naoriny dimy taona lasa izay, iray amin'ireo tetikasa vitsivitsy izay efa vitany hatramin'ny nanokafany ny trano fijereny tamin'ny 1945.
Drafitra nataon'i Jorn Utzon ho an'ny Opera House ao Sydney
Sarin'ny fiaramanidin'ny Opera House ao Sydney. Sary avy amin'i Mike Powell / Allsport / Getty Images Fanatanjahantena / Getty Images
Ny famolavolana ireo tetikasa lehibe indrindra amin'ny tetik'asa ara-javakanto manerana izao tontolo izao dia voafaritra matetika amin'ny fifaninanana iray-toy ny antso an-tariby, fanandramana, na fanadinadinana asa. Jørn Utzon dia niditra tao anatin'ny fifaninanana tsy nitonona anarana ho an'ny trano fanorenana izay hiorina ao Aostralia amin'ny toerana iray mankany amin'ny seranan-tsambo ao Sydney. Avy amin'ny pejy 230 misy avy amin'ny firenena telo ambinifolo, no nofantenana ny foto-kevitr'i Utzon.
Ny haino aman-jery dia nanoritsoritra ny drafitra nataon'i Jørn Utzon ho toy ny "fonosana boribory telo somary rakotra fotsy." Fantaro bebe kokoa momba ny Architectural Jørn Utzon.
Horonantsary maromaro no miara-miasa ao amin'ny Opera House ao Sydney
Ny Forecourt ao amin'ny Opera House ao Sydney any New South Wales, Aostralia. Saripikan'i Simon McGill / Moment Mobile Collection / Getty Images
Ny Opera House ao Sydney dia sehatra misy teatra sy efitrano rehetra mifandraika eo ambanin'ny kibay malaza. Ireto misy fandaharana:
Efitrano fampisehoana, seza an-tariby 2679
Trano Joan Sutherland, seza 1507
Theater Theatre, seza 544
Toerana fitehirizam-bokatra 398
Toerana fanontam-pirinty 280, anisan'izany ny seza 156 mipetraka eo amin'ny sezany
Ny efitranon'i Utzon (ny Reception Hall) dia miara-mipetraka amin'ny seza 200 miaraka amin'i Nana Ditzel
Ny endriky ny efitranon'i Utzon no hany tokotokony ho an'ny tranonkala feno an'i Jørn Utzon . Ny Design Hall of Future Forecourt sy Monumental, faritra midadasika midadasika midadasika izay mitondra mankany amin'ny sehatr'i Utzon sy ny fidirana amin'ny efitrano sy ny teatra, dia nomena an'i Peter Hall.
Hatramin'ny nisokafany tamin'ny taona 1973, dia nanjary fitaovam-piofanana be mpahary indrindra eto an-tany ity trano ity, ary mahasarika mpitsidika 8.2 tapitrisa isan-taona. Fihetsiketsehana an'arivony, vahoaka sy tsy miankina, no atao isan-taona ao anatiny sy ivelany.
Fihetsiketseham-panoherana an'i Jorn Utzon nanerana ny Opera House ao Sydney
Opera House Sydney (1957-1973) eo amin'ny fanorenana manodidina ny 1963. Saripikan'i JRT Richardson / Hulton Archive Collection / Fox Photos / Getty Images
Mpahay tantara danoà Jørn Utzon dia nofaritana ho olona manokana. Na dia izany aza, nandritra ny fananganana ny Opera House Sydney, i Utzon dia nanjary nifangaro tamin'ny resaka politika. Nogadrain'ny mpanao gazety mpanohitra izy, izay nanery azy hivoaka ny tetikasa talohan'ny nahavitan'izy io.
Ny tranon'ny Opera dia nofenoin'ireo mpanakanto hafa teo ambany fitarihan'i Peter Hall. Na izany aza, i Utzon dia afaka nanatontosa ny fotodrafitrasa fototra, ka namela fotsiny ny interiors mba ho vitan'ny hafa.
Frank Gehry ao amin'ny Opera House ao Sydney
Ny tranoben'ny Opera House ao Sydney dia mitsambikina mankany amin'ny ranon'i Australie ao Sydney Harbour. Saripikan'i George Rose / Getty Images News Collection / Getty Images
Tamin'ny 2003 dia nahazo ny Prizker Architecture Prize i Utzon. Ilay mpahay malaza Frank Gehry dia tao amin'ny Jury Pritzker tamin'ny fotoana nanoratany hoe:
"[ Jørn Utzon ] dia nanao fanorenana mialoha ny fotoany, lavitra ny teknolojia azo ampiasaina, ary niaritra tamina fampahalalam-baovao mahatsiravina sy fanakianana mahatsikaiky hanangana trano izay nanova ny endriky ny firenena iray manontolo. fiainana iray izay nahatonga ny fisian'ny tsangambatom-poko iray manerana izao tontolo izao. "
Voasoratra ny boky, ary ny horonan-tsary dia nanao famakiana ireo 16 taona niorenany mba hamitana ny toerana.
Fanavaozana tao amin'ny Opera House Sydney
Architect Jan Utzon, zanak'i Jorn Utzon, ao amin'ny Opera House ao Sydney tamin'ny volana Mey 2009. Saripikan'i Lisa Maree Williams / Getty Images Entertainment Collection / Getty Images
Na dia tsara tarehy aza ny sary sokitra, dia nitsikera mafy ny Trano Opera tao Sydney noho ny tsy fahampian'ny fandefasana toerana ho toy ny toerana hanaovana fampisehoana. Nilaza ireo mpihira sy mpilalao tantara an-tsehatra fa nahantra ny acoustics ary tsy nahavita ny fampisehoana na ny kianja filalaovana ny kianja. Rehefa nandao ny tetikasa tamin'ny 1966 i Utzon, dia natsangana ny rindrina, saingy natsangan'i Peter Hall ny fanorenana anatiny. Tamin'ny taona 1999, ny fikambanan'ny ray aman-dreny dia nitondra an'i Utzon hanoratra ny tanjony ary hanampy amin'ny famahana ny olana saro-bidy ao amin'ny trano fivoahana.
Tamin'ny taona 2002, Jørn Utzon dia nanomboka fanavaozana famolavolana izay hitondra ny atin'ny trano akaikin'ny fahitana azy tany am-piandohana. Nankany Aostralia i Jan Utzon zanany lahy mpanao famolavolana, mba hanomana ny fanavaozana ary hanohy ny fampandrosoana ho avy.
"Ny fanantenako dia ny tranokalam-pifanakalozan-dresaka ho an'ny tranonkala", hoy i Jorn Utzon. "Ny taranaka ho avy dia tokony hanana fahafahana hampivelatra ny trano ho an'ny fampiasana amin'izao fotoana izao."
Fihetsiketsehana manoloana ny tranoben'ny Opera House Sydney
Ny tranoben'ny Operajan'i Sydney, afovoan-tanànan'i Sydney, tamin'ny taona 2010. Saripikan'i George Rose / Getty Images News Collection / Getty Images
"Afaka manana Opera Teo An'i New York i Sydney fa tsy mihoatra noho ny vidin'ny fanamafisana ilay taloha", hoy ny gazety Aostraliana tamin'ny 2008. "Famolavolana na fanavaozana" dia fanapahan-kevitra mahazatra ataon'ny tompon-trano, ny mpandraharaha ary ny governemanta.
Ny efitrano fandraisam-bahiny, izay antsoina ankehitriny hoe Room Utzon, dia iray amin'ireo sehatra anatiny voalohany navaozina. Nisy Colonnade ivelany nanokatra ny fomba fijerin'ny seranana. Ankoatra ny efitranon'i Utzon, ny akustikan'ny toerana dia mbola miteraka olana, raha tsy "fara-tampony." Tamin'ny taona 2009, ny fampindramam-bola dia ankatoavina ho fampiroboroboana ny faritry ny backstage sy fanavaozana lehibe hafa. Ny asa dia nomanina ho vita amin'ny faha-40 taonan'ny toerana. Taloha kelin'ny nahafatesany tamin'ny 2008, Jørn Utzon sy ny fianakaviany avy ao amin'ny architects dia mbola mamerina manasongadina ny antsipirian'ny tetikasa fanavaozana ao amin'ny Opera House ao Sydney.
> Opera House Sydney, Centre UNESCO World Heritage Centre, ny Firenena Mikambana [nahazo ny 18 Ôktôbra 2013]
> Tantaran'ny Opera House ao Sydney, Opera House ao Sydney; Ny Architecture an'i Jørn Utzon nataon'i Kenneth Frampton, Jørn Utzon 2003 Laureate Essay (PDF) [nahazoan-dalana ny 2 Septambra 2015]
> Tantaran'ny Opera House ao Sydney, Opera House ao Sydney; Biography, The Hyatt Foundation / Ny loka ara-panatanjahan'i Pritzker, 2003 (PDF) [nahazoan-dalana ny 2 Septambra 2016]
> Biography, The Hyatt Foundation / Ny Pritker Architecture Prize, 2003 (PDF) [nahazoan-dalana ny 2 Septambra 2016]
> Peter Hall, ny Oniversiten'i Sydney; Sydney Opera House History ary Sydney Opera House Media Room sy Sydney Opera House Venues, tranokala ofisialin'ny Sydney Opera House [nahazoan-dalana tamin'ny 6 Septambra 2015]
> Feon'ny kabary, Thomas J. Pritzker [nahazoan-dalana tamin'ny 18 Oktobra 2013]
> Ndeha jerentsika ity fanavaozana ity, ary manangana tranokely vaovao avy amin'i Greg Lenthen, The Sydney Morning Herald. , 7 Febroary 2008; Overiew: tranokala, tranokalan'ny Opera House ao Sydney [nahazoan-dalana ny 18 Oktobra 2013]
Antoni Gaudi, Portfolio-ny Art sy Architecture
Tendrombohitra lehibe mahagaga - Ireo mpikomy amin'ny haavo
Architecture any Irlandy, Torolalana ho an'ny mpandeha an-trano
Mitazona ny tehina amin'ny lalao Super Bowl
Mandehana any amin'ny Wall Street any Manhattan ambany
Star Wars Architecture, Real ary Digital
Ny kianja voalohany Super Bowl
Architecture any Vienne, Torolalana ho an'ny mpizaha tany
Green Design ao amin'ny foiben'ny US Guard Guard
Inona no Mu?
Facts ara-jeografika momba an'i New Delhi, Inde
Grey Anatomy Season 1: Character Character
Torolàlana iray hanombohana club ny fifanakalozan-kevitra
Dingana Lehibe ho an'ny fidirana ao amin'ny Oniversiten'i Missouri Valley
7 Mampihoron-koditra, mahatsikaiky, tsy misy tsara antony hisoratra anarana amin'ny oniversite an-tserasera
Mars, Romanina Andriamanitra
Ahoana ny fanoloana Skateboard Trucks
Nahoana no Silamo no Avelanao Hitsidika Ny Tanànan'i Mecca ao Mecca?
Ny Consortium Five College
Ny dikany isan-karazany amin'ny 'Blade' amin'ny gile
Firenena Nosoratan Betsimitatatra Avy Ao Amin'ny Boky
Funny Quotes maneso an'i Donald Trump
Fanadihadiana momba ny fe-potoana "Horse Horse"
Toerana tsy ahafahana mandeha mandeha tsy misy kodiarana amin'ny andro iray tsy misy andron'ny akanjo
Conjugations and Examples for the Japanese Verb 'Kuru' (to come)
Finoana advantista mitandrina ny andro fahafito
Top 10 Rock Ballads amin'ny '90s
Biographie an'ny Chellsie Memmel, World Class Gymnast